Semalt: IWebhu yeFree Web Scraping Software ye-Newbies kunye nePros Real
Ngokungafani nomprofeti, ongeyena umprogram akakwazi ukubhala iikhowudi kwaye engenakho izakhono zobugcisa. Ngaphezu koko, unobuthakathaka kwiimathematika kwaye uhlala ejonga iindlela ezilula zokukrazula okanye ukukhipha idatha, ukufeza imisebenzi yakhe ye-intanethi. Ukuba awuyena umprogram ojongene nenani lemisebenzi, unokuzama le software okanye izicelo ukuze ulandele iiwebhusayithi.
I-Scraper inamandla yokwandiswa kwe-Google Chrome. Yisicelo esilula kodwa sisimangalisa sokutsala iphepha elilodwa okanye amaninzi kunye nokuguqula idatha ekhishwe kwiipredishithi. Ungayisebenzisa le nkqubo kuphela xa unayo i-Chrome njengesiqulathi sakho sewebhu esiyintloko.
I-scraper izakuyitshintsha ngokuzenzekelayo amaphepha akho ewebhu kwaye ikhuphe idatha ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Akunikezi iinketho ezingenamlinganiselo kodwa unobungqamene-benzisi obujongene nomsebenzisi.
I-Twitter kunye ne-Facebook API
Ngokusebenzisa i-Facebook kunye ne-Twitter API, kulula ukuba ukhiphe idatha esuka kwinani elikhulu lewebhu. Unokuphinda uhlalutye amaziko abakhuphiswano bakho kwaye ujonge amagama abo. I-API yinkqubo ebonisa ukuba izixhobo zenkampani ezingamashumi amathathu zifikelela kwiinkqubo zentlalo yoluntu. I-APIs ze-Facebook kunye ne-Twitter zinokudibaniswa ngeendlela ezahlukeneyo; unako ukuqokelela, ukuskena nokukhipha ulwazi kwiinkcukacha ezininzi zeendaba zoluntu njengoko ufuna.
Yinamandla kwaye enye yeyona ndlela iphambili yokutsalwa kwewebhu kunye neenkqubo zokumbiwa kwedatha. Ngenisa. Yona inombolo yokukhetha enye yeenkqubo ezingezizo kunye nabaphuhlisi bezicelo zewebhu. Ungayisebenzisa le sixhobo ukukhangela idatha kwii-URL ezahlukeneyo kwaye wenze ii-API zakho ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Ngenisa. Io, unako ukufumana iziphumo ezifunayo kumasekhondi ambalwa. Le nkqubo ikuvumela ukuba ukhethe idatha kwaye uchaze amaphepha ewebhu ngeqhosha lokuchofoza kunye neqhosha. Kuza kuphanda iiwebhusayithi ezahlukeneyo ukuba ufumane idatha echanekileyo yokukhishwa.
I-Kimono Labs iyona kuphela isixhobo kuloluhlu oluza zombini kwiinguqulelo zamahhala kunye ezihlawulwe. Ukuba awuyena umprogram, kufuneka ukhethe i-version yayo yamahhala kwaye akudingeki ukuba uchithe imali eninzi kwiiprojekthi zedatha. Kwaye ukuba unomprofeti okanye umqeqeshi wezobugcisa, ucebise ukuba usebenzise inguqulo yayo ehlawulwayo eya kuhlawula into esuka kwi-20 ukuya kwii-30 zama-30 ngokusekelwe kwimfuno yakho kunye nesicwangciso okhethayo.
Ezi zicelo ze-web scraping zifanelekile kubaprogram. Zilula ukuyisebenzisa kwaye ziza ne-intanethi inkxaso. Ngaphezu koko, zonke ezi zinto zisebenziseka idatha kwiindawo ezimbini ezisisiseko kunye neziphambili, ngaphandle kokunciphisa ngexesha kunye nomgangatho. Ekugqibeleni kodwa kungeyona encinci, ezi zicelo zingahlela idatha yakho kwaye zisuse iimpazamo zeepelingi ngokufanelekileyo Source .